eMyanmar News Essence of Myanmar News
Ruby Mo Mo
ကမ္ဘာ့မြင်းစီးပြိုင်ပွဲ ရွှေတံဆိပ် ဆုရှင် ဒေါက်တာနိုင်လတ်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်နှင့် ၁၅ ရက်နေ့က အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု OKALAHOMA မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သော &...
၂၁ ရာစုကို အာရှ ရာစုနှစ်ဟု နိုင်ငံရေး အကဲခတ် အချို့က သတ်မှတ် ကြသည်။ ၂၁ ရာစု အဝင်မှာ တရုတ်နှင့် အိန္ဒိ...
ဂျပန် နိုင်ငံရေးနှင့် ဝန်ကြီးချုပ် အာဘေး အနာဂတ်
ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ဂျပန်နိုင်ငံ အထက် လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ၌ လက်ရှိ အာဏ...
စိန်ခေါ်မှု အသစ်များနှင့် ဥရောပ သမဂ္ဂ
ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့က ဘာလင် မြို့တော်တွင် ဥရောပ သမဂ္ဂေ ခါင်းဆောင်များ စုဝေးခဲ့ကာ ဥရောပ သမဂ္ဂ နှစ...
တရုတ်စစ်အင်အား တိုးချဲ့မူနှင့် အမေရိကန်အမြင်
၂ဝဝဝ ပြည်နှစ်တွင် အမေရိကန် ကွန်ဂရက်က ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနသည် တရုတ် နိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ရေး အင်အား တိုးချ...
ကင်ဂျုံအီလ်နှင့် မြောက်ကိုရီးယား တပ်မတော်
အောက်တို ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံ၏ အဏုမြူဗုံး စမ်းသပ် ဖောက်ခွဲ မှုသည် ...
ကွန်ဒို လီဇာရိုက်စ်၏ ပုံရိပ်များ
ခင်မင်သူ များက ကွန်ဒီ ဟု ခေါ်သည့် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ကွန်ဒိုလီ ဇာရိုက်စ်သည် ရှားမှ ရှားသ...
၂ဝဝ၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၆)ရက်နေ့တွင် အမေရိကန် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနမှ လေးနှစ် တစ်ကြိမ် ထုတ်ပြန် သော...
ငယ်သော်လည်း အဆိပ် ပြင်းသည့် စင်္ကာပူ ကာကွယ်ရေး မူဝါဒ
စင်္ကာပူ နိုင်ငံသည် နိုင်ငံ အရွယ်အစား အရ လည်းကောင်း၊ လူဦးရေ အရ လည်းကောင်း အလွန် သေးငယ် သော်လည်း အာရှေ...
နေ့စဉ် ဂြိုလ်တု သတင်း တွေမှာ၊ သတင်းစာထဲမှာ ကမ္ဘာအနှံ့ အပြားတွင် ဖြစ်ပေါ် နေသော လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ ...
ဘတ်ဂျက်ကိစ္စ အငြင်းပွားမှု မပြေလည်သေး
384 Views အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အစိုးရ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း တစိတ်တပိုင်း ရပ်ဆိုင်းသွားစေတဲ့ နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက် ရသုံးငွေ စာရင်း ဥပဒေသစ် ကိစ္စ ...
ခိုလှုံသူတွေရဲ့သင်္ဘာာ အီတလီမှာ နစ်မြုပ်
356 Views ဆီးရီးယားလက်နက် ဖျက်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်ရှိ
350 Views YIUS ကျောင်းနှင့် Navitas ( Australia ) တို့ပူးပေါင်း ဖွင့်လှစ်သော နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု University Foundation Program ဧ။် ( ၂၀၁၃ ) May Intake သို.စတင်လျှောက်ထားနိုင်
315 Views ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နှင့် စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းအား ကျင်းပဆဲ လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးမည်
8845 Views မလေးရှားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားဘဲ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရန် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ပြောကြား
331 Views ဇမ်ဘိုအန်ဂါမြို့တွင် သူပုန်တို့နှင့် စစ်ဆင်ရေး ပြီးဆုံးသွားပြီဟု ဖိလစ်ပိုင် ကြေညာ
267 Views တောင်ကိုရီးယား၏ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုအတွင်း အကြီးဆုံး စစ်ရေးပြ အခမ်းအနား ကျင်းပ
277 Views ဆီးရီးယား အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများက ဒုက္ခသည်များအတွက် အကူအညီပေးရန် တောင်းဆို
274 Views အီရန်အတွက် ရှင်းလင်းသော အမြင်ရှိကြောင်း အိုဘားမားက နေတန်ယာဟုအား ပြောကြား
275 Views ရန်ကုန်မြို့ရှိ လူဦးရေ သုံးသန်းကျော် နေ့စဉ်ရထားအသုံးပြု သွားလာနိုင်ရန် ဂျပန်က ကူညီစီစဉ်ပေးမည်
406 Views မြန်မာ့ကမ်းလွန်တွင် ဗီယက်နမ်နှင့်ပြင်သစ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တူးဖော်
446 Views ငွေစက္ကူများတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ ပြန်ရိုက်နှိပ်ပေးရန် ဆန္ဒလက်မှတ် စကောက်
341 Views Myanmar News
သမ္မတ ဖြစ်ခွင့် ဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၅၉ (စ) ပြင်ဆင်နိုင်ဖွယ်ရှိ
241 Views ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် ပြဌာန်းထားသော သမ္မတ ဖြစ်ခွင့်ဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၅၉(စ) ပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက် လွှတ်တော်၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် သံတွဲမြို့ရှိ မြို့မိမြို့ဖများ၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအား တွေ့ဆုံ အမှာစကားပြောကြား
324 Views ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နှင့် စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းအား ကျင်းပဆဲ လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးမည်
331 Views တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်း ရန်ကုန်လေဆိပ် ပြေးလမ်းပေါ်၌ အရှိန်ထိန်းချုပ်သည့် လေထီးမပွင့်၍ ရန်ကုန်လေဆိပ် ခေတ္တပိတ်ခဲ့ရ
341 Views ရန်ကုန်မြို့ရှိ လူဦးရေ သုံးသန်းကျော် နေ့စဉ်ရထားအသုံးပြု သွားလာနိုင်ရန် ဂျပန်က ကူညီစီစဉ်ပေးမည်
406 Views ကမ္ဘာကျော် ၀ိပဿနာ တရားပြဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ကာ၏ အရိုးပြာကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ သယ်ဆောင်ပြီး ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း မျှောမည်
321 Views ADSL အင်တာနက် ဝန်ဆောင်ခ အွန်လိုင်းမှ စတင်ပေးသွင်းနိုင်
365 Views Heineken ဘီယာစက်ရုံ ဆောက်မည့် သတင်းကြောင့် လယ်မြေများ အဆ၂၀ ကျော် ဈေးမြင့်
399 Views မြန်မာ့ကမ်းလွန်တွင် ဗီယက်နမ်နှင့်ပြင်သစ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တူးဖော်
446 Views Recent Posts	သမ္မတ ဖြစ်ခွင့် ဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၅၉ (စ) ပြင်ဆင်နိုင်ဖွယ်ရှိ
“ဂန္တဝင်ထဲက…လမ်း” အပိုင်း (၄)
“ဂန္တဝင်ထဲက…လမ်း” အပိုင်း (၃)
“ဂန္တဝင်ထဲက…လမ်း” အပိုင်း (၂)
“ဂန္တဝင်ထဲက…လမ်း” အပိုင်း (၁)
ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နှင့် စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းအား ကျင်းပဆဲ လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးမည်
မြန်မာ့ကမ်းလွန်တွင် ဗီယက်နမ်နှင့်ပြင်သစ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တူးဖော်
ခုခေတ်မှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ စစ်တိုက်ပြီး အနိုင်အရှုံးနဲ့ အင်အားကိုကြည့်ရမယ့် အချိန်မဟုတ်တော့ဘူး
YIUS ကျောင်းနှင့် Navitas ( Australia ) တို့ပူးပေါင်း ဖွင့်လှစ်သော နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု University Foundation Program ဧ။် ( ၂၀၁၃ ) May Intake သို.စတင်လျှောက်ထားနိုင်
carpinteyrohmx: Regardless of how you are constrained withabudget, it's be... RWDCRMS: xenical achat en ligne xenical meilleur prix xenical prix xe... eooyovre7: IncePresidente MANAGER di Donna Karan aeroporto gucci occh... wxfxcwac8: Quando voi rivenditi amiciefamiglie borse, gli acquirenti... tvmulkwj7: Tutti amano proprio womens borseeFred Vuitton.Ora ?? la ma... Find us on Facebook	Social
Subscribe to our email newsletter.	Follow us on Google+	Articles	Land Rover Freelander
Crown Majesta (2004)
ကမ္ဘာ့မြင်းစီးပြိုင်ပွဲ ရွှေတံဆိပ် ဆုရှင် ဒေါက်တာနိုင်လတ်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း ဘယ်သွားမလဲ အိန္ဒိယ ဂျပန် နိုင်ငံရေးနှင့် ဝန်ကြီးချုပ် အာဘေး အနာဂတ် စိန်ခေါ်မှု အသစ်များနှင့် ဥရောပ သမဂ္ဂ တရုတ်စစ်အင်အား တိုးချဲ့မူနှင့် အမေရိကန်အမြင် Interviews
ဗြိတိန်မှ စကော့တလန်ခွဲထွက်ရေး စကော့တလန်အစိုးရ ပထမ၀န်ကြီး အဲလက်စ်ဆယ်မွန်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ (WTO) ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်သစ် ရောဘတ်တိုအဇီဗီဒို ဆီးရီးယားလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆလင်းမ်အစ်ဒရစ်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း ခုခေတ်မှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ စစ်တိုက်ပြီး အနိုင်အရှုံးနဲ့ အင်အားကိုကြည့်ရမယ့် အချိန်မဟုတ်တော့ဘူး Health
သင့် ကျန်းမာရေးအတွက် တရားထိုင်ကြည့်ပါ အ၀လွန်သူများ အတွက် ရှောက်ရွက်၏ အစွမ်း အစာမရှိသော အစာအိမ်အတွက် ရေသောက်ပေးပါ ဥရောပတစ်ဝန်း လူ ၁ဝဦးတွင် တစ်ဦး အဆုတ်ရောဂါကြောင့် သေ ဒိန်ချဉ်ဘာကြောင့်သောက် သင့်သလဲ © Copyright 2013, All Rights Reserved. | Powered by Ye Shin Scroll To Top